(Daawo)Madaxweynaha Puntland iyo Micheal Keating oo ka wada hadlay Xaalada Tukaraq | puntlandi.com
(Daawo)Madaxweynaha Puntland iyo Micheal Keating oo ka wada hadlay Xaalada Tukaraq
Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Danjire Micheal Keating oo maantay soo gaaray Magaalada garoowe ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Danjire Micheal Keating ayaa ka wada hadlay arimaha Soomaaliya,Xiisadda u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland ee ka taagan deegaano ka tirsan Gobalka Sool gaar ahaan Tukaraq.
Markii uu kulanku soo dhamaaday Waxaa saxaafada Si wadajir ah ula hadlay Madaxweynaha Puntland iyo Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Danjire Micheal Keating.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Danjire Micheal Keating ay ka wada hadleen arimo dhowr ah oo la xariira arimaha Soomaaliya.
Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Danjire Micheal Keating ayaa sheegay in Puntland qayb muhiim ah ka tahay Soomaaliya Islamarkaana ay isla soo qaadeen doorashada 2020 iyo shirka Dowlad gobaleedyada iyo dowladda Federalka Uga furmaya Magaalada Kismaanyo.
Labada Masuul masoo hadal qaadin Khilaafka ka dhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo Wadamada Khaliijka oo ay dowladda Federalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ay ku kala aragti duwan yihiin.